-C/Qeybdiid oo shaaciyay cida mas’uulka ka ah caqabadaha heysta Dastuurka – XAMAR POST
Gudoomiyaha gudiga dib u eegista dastuurka ee labada Aqal Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xasan Cawaale qeybiid ayaa faah faahin ka bixiyay halka uu marayo dib u eegista dastuurka dalka iyo waqtiga la soo geba-gabeynayo.
Waxa uu sheegay in ka guddi ahaan ay wataan Shaqadooda dib u eegista Dastuurka iyo latashiyada ay ka sameynayaan,isla markaana uu rajeynayo in Bisha ugu dambeysa ee sanadkaan 2019 ay dhamaan soo geba-gabeyn doonaan cutubyada dastuurka dalka loona gudbi doono Baarlamaanka Soomaaliya.
Gudoomiyaha gudiga dib u eegista dastuurka ee labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xasan Cawaale qeybiid ayaa waxa laga weeydiiyay cida qaadeysa mas’uuliyada hadii waqtiga loo asteeyay lagu soo dhameystiri waayo dastuurka,waxaana uu yiri.
“Hadda waxaan u maleynaya eeda cida qaadaneysa Heer dowladeed ama heer dowlad goboleed ha noqdee ama anaga ayaa eeda qadaneyna oo mas’uuliyadeeda nagala rabay ama Dowladda Federaalka oo hoggaaminteda ama meel marinteeda laga rabay ayaa qaadaneysa”.
Si kastaba Guddiyada loo xil saaray arrimaha la xiriira dib u eegista Dastuurka dalka ayaa waxaa ay horay u shaaciyeen in sanadkaan 2019 la soo geba-gabeyn doono dib u eegista lagu sameynayo dastuurka dalka,isla markaana Baarlamaanka Soomaaliya loo guddbin doono.